Fivorian’ireo mpandraharaha miteny frantsay Lany ho mpitam-bola ny Malagasy
Nandritra ny fivoriana voalohan’ireo mpisehatra miteny frantsay ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny firenena avy any amin’ny firenena Atsimo no nahalanian’ny teratany Malagasy, Sylvia Andoniaina ho mpitam-bola eo anivon’ny EFOI.
Tanjona ny hametrahana amin’ny tokony ho izy ny seha-pihariana jono izay mitana anjara toerana eo amin’ny toekaren’ny firenena. Tetikasa fiarovana sy fanajariana ny vatoara (récif corallien) sy ny ala honko (mangroves) izay toeram-ponenan’ny trondro ary hitomboan’ireo karazan-java-manan’aina anaty rano. Ho an’i Madagasikara manokana dia notontosaina omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono Anosy ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa. Haharitra 3 taona ny tetikasa ary hotantanin’ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana na ho an’ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO). Tsiahivina fa efa nampanantenaina talohan’ny TICAD io famatsiam-bola avy amin’i Japoney io ary mbola maro ireo fanampiana ho an’ny firenena Afrikanina voarakitra tamin’ny TICAD 7 farany teo. Mbola nanamafy ny fahavononana amin’ny fampandrosoana ny harena anaty ranon’i Afrika hatrany ny Japoney araka ny lahatenin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny masoivohony eto Madagasikara, Yorio Ito.